Mgbazinye ụgbọ ala AVIS ugbu a na Myanmar
Home » Business Travel Akụkọ » Mgbazinye ụgbọ ala AVIS ugbu a na Myanmar
Cargbọ ala mgbazinye AVIS ekwuputala mgbasawanye ọfụma ya na Myanmar iji kwado ndị njem azụmahịa na ndị njem. Officelọ ọrụ ọhụụ Avis Myanmar dị na Inya Lake Hotel, Yangon.
Avis Myanmar, onye enyemaka nke RMA Group, na-enye ma ụzọ mgbazinye ụgbọ ala obere oge na ogologo oge yana ụgbọ mmiri ọhụrụ ọhụụ. A na-enye ndị ahịa ma ego ụlọ na nke ndị ọkwọ ụgbọala na-ebugharị nke sitere na akụ na ụba na ụgbọ ala azụmahịa.
“Otu n’ime ihe dị mkpa anyị gụnyere gụnyere iwulite netwọkụ zuru ụwa ọnụ yana ịgbasa akara ụkwụ mpaghara anyị. Myanmar bụ mba nwere nnukwu ikike na mmepe ụlọ ọrụ ụgbọ ala ya ma anyị na-ele anya ịbụ akụkụ nke uto a. Hans Mueller, Onye isi oche Onye Isi Ala Globalwa - International, Avis Budget Group.
“Site na oghere nke ụlọ ọrụ Avis anyị na Myanmar, anyị ga-enwe ike ịnye nhọrọ ụgbọ ala mgbazinye ọzọ ma nyere aka wulite ụlọ ọrụ ahụ. Anyị na-agbasi mbọ ike ijere ndị ahịa anyị ozi na ọnọdụ ha ọ bụghị naanị na Yangon mana obodo ndị ọzọ site na netwọkụ anyị gbasaa na Mandalay, Nay Pyi Taw, Bagan, Taunggyi na Dawei, ”gbakwunyere Nwada Prasoporn Tansupasiri, onye isi njikwa, Avis Myanmar.
Oké ifufe Dorian ọzọ na mwakpo nke ebe ndị njem?
Ulo oru ndi njem nlere: Iso ndi oru mgbasa ozi eme ihe
Italytali meghee maka ndị njem US na-abata na ụgbọ elu Delta Air Lines 'COVID nwalere
Ndị nwe Canada na ndị ọkwọ ụgbọ mmiri jikọtara ọdịiche dị n'etiti ọdịnala na nke ụgbọelu dị anya
Ndi India ga - eme ka Vistara ụgbọ elu glitch gaa Tokyo?
Na Napa Valley Wine Train na-emegheghachi na May 17
Site na ịgba ọgwụ mgbochi na-agbanye ọsọ, onye njem US na-enwekwu obi ike